Manchester United oo gaartay wareega siddeeda ee tartanka FA Cup, kadib markii ay adkaatay kooxda Chelsea + SAWIRO – Gool FM
Manchester United oo gaartay wareega siddeeda ee tartanka FA Cup, kadib markii ay adkaatay kooxda Chelsea + SAWIRO
Bashiir February 18, 2019
(England) 19 Feb 2019 Waxaa soo dhamaaday kulan ciyaareedkii u dhaxeyey kooxah Chelsea iyo Manchester United kaas oo ka tirsanaa taratnka FA Cup wareegiisii shanaad , waxaana guul wax ku ool ah gaaray kooxda Man united .
United ayaa garoonka ku soo gashay qaab ciyaareed caajib ah qeebtii koowaad ee ciyaarta waxaana aad lowga gacan sareeyey Bules , gacan ku heentii kulanka oo dhan waxaa la wareegtay Manchester .
Manchester united ayaa la timid goolkii koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga reer spain ee Ander Herrera daqiiqadii 31- ee ciyaarta waxaana goolkaas caawinteeda laaha Paul Pogba.
United ayaa sii wadatay duulaankeedii weerarka waxaa yimid gool kale oo labaad waxaana shabaqa gaaray Paul pogba daqiiqadii 45-aad ee ciyaarta waxaana goolkaas ka caawieyey Marcus Rashford oo ka dhex muuqday kulanka .
Qeebtii koowaad ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay United oo hogaanka u heysa ciyaarta iyo ciyaartoyda Chelsea oo uu ka muuqdo niyad jab aad u weyn , nasiino ka dib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta .
Chelsea ayaa sameesay isku dayo badan balse kooxda Manchester ayaa iska diiday in shabaqeeda gool laga dhalyo , United ayaana afar sano oo hore dhibane u aheyd Bules madaama afartaa sano United laga reebayey tartankan FA cup .
ugu dambeen ciyaartii u dhaxeysay kooxaha Chelsea iyo manchester united waxa ay ku soo dhamaatay 2-0 oo ay guushu ku raacday kooxda manchester .
Sucuudiga oo beeniyay in dhaxal sugaha dalkaas Mohammed bin Salman uu doonayo inuu iibsado Manchester United
HORDHAC : Liverpool vs Bayern Munich xidigaha maqan , rikoorada kulanka iyo wax kasto oo aad kaga baahantahay inaad ka ogaato kulanka .